खोप व्यवस्थापनमा लापर्वाही : ३५ लाख २२ हजार डोज स्टोरमै, केन्द्रमा खोप छैन – Health Post Nepal
खोप व्यवस्थापनमा लापर्वाही : ३५ लाख २२ हजार डोज स्टोरमै, केन्द्रमा खोप छैन
२०७८ साउन २२ गते १४:४२
अघिल्लो साता नै मनाङ र मुस्ताङमा उमेर पुगेका सबै नागरिकले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइसके। मुस्ताङमा १८ वर्षभन्दा माथि सबै ९ हजार ३०० नागरिकले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाए। कामको शिलशिलामा त्यहाँ पुगेका थप २१३ जना मानिसले पनि जिल्लामै खोप लगाए।
त्यसअघि मनाङ जिल्लामा १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै चार हजार १ सय ९८ नागरिकले खोप लगाइसकेका थिए।
मुस्ताङको कूल जनसंख्या १३ हजार ४५२ र मनाङको कूल जनसंख्या ६ हजार ५३८ छ।
‘आगामी चैत महिनासम्म देशभर सबै जनसंख्यालाई खोप पुर्‍याइसक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वको सरकारको प्रतिवद्धता छ’ देशकै थोरै जनसंख्याभएका हिमालपारिका यी जिल्ला कोरोनाविरुद्ध पूर्ण खोप लगाइसकेको समाचारहरू शेयर गर्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले लेखे– ‘तुलनात्मक रूपमा थोरै जनसंख्या भए पनि सांकेतिक हिसाबले यसले ठूलो महत्व राख्छ। अब क्रमशः पूर्ण मात्रामा खोप प्राप्त गरिसकेका जिल्लाको संख्या थपिदैं जानेछ।’
सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशसँगै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले साउन ३ गते संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा भनेका थिए– यो सरकारको तीनवटा प्राथमिकता छन्, खोप, खोप र खोप।
देउवाको त्यो भनाइको अर्थ हो जसरी भए पनि सबैभन्दा पहिला सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइसक्ने। देउवाले भनेअनुसार देशमा खोप भने नभएको होइन।
स्टोरहरूमा खोप थन्किरहेको छ तर सरकारले भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्षमताले भ्याउँदा भ्याउँदै पनि खोप लगाउन सकेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एउटा तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म १ करोड १२ हजार डोज खोप नेपाल भित्रिसकेको छ। त्योमध्ये अहिलेसम्म पहिलो र दोस्रो डोज गरी जम्मा ६४ लाख ८९ हजार ६ सय ८२ जनाले मात्रै खोप लगाएका छन्।
र, ३५ लाख २२ हजार ३१८ डोज खोप अझैं सरकारकै भन्डारमा छ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार अहिलेसम्म कोभिसिल्ड २४ लाख ४८ हजार डोज आइसकेको छ। योमध्ये १० लाख डोज नेपालले भारतसँग आफै खरिद गरेको हो भने १० लाख डोज अझै ल्याउन बाँकी छ। ३ लाख ४८ हजार डोज गाभी र अरु भारतको अनुदान हो।
त्यस्तै चीनबाट ५८ लाख डोज भेरोसेल खोप आइसकेको छ। योमध्ये सरकारले ४० लाख डोज किनेको हो भने बाँकी चीन सरकारले अनुदान दिएको हो।
शुक्रबारमात्रै भुटानले दिएको २ लाख ३० हजार डोज एस्ट्राजेनेका खोप पनि नेपाल आइपुगेको छ।
अब कति खोप आउन सक्छ?
सरकारले आगामी माघसम्ममा करिब ५ करोड २२ लाख ८२ हजार डोज सुनिश्चित (अहिलेसम्म आइसकेको समेत) गरिसकेको छ।
त्योमध्ये जापानबाट १६ लाख एष्ट्राजेनेका र चीनबाट १६ लाख भेरोसेल असोज महिनाभित्रै आइसक्नेछ। यो दुवै खोप अनुदानमा आउन लागेको हो। त्यस्तै सरकारले चीनबाट खरिद गर्ने ६० लाख भेरोसेल र भारतबाट १० लाख डोज कोभिसिल्ड पनि आइपुग्नेछ।
त्यस्तै माघ महिनासम्ममा अमेरिकाबाट मोडेर्नाको ४० लाख डोज खोप आइसक्नेछ। यसको रकम विश्वबैंकले अमेरिकालाई भुक्तानी गरिसकेको छ। त्यस्तै अमेरिकाबाटै लागत सहभागितामा १ करोड १० लाख र कोभ्याक्स-गाभीमार्फत् १ करोड १३ लाख डोज खोप पनि माघसम्मै आइपुग्नेछ। अमेरिकाबाटै आउने यी खोप कुन-कुन हुन् त्यसबारे भने अझै निश्चित भइसकेको छैन। सरकारले १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि ६० लाख डोज फाइजरको खोप पनि माघ महिनाभित्रै ल्याइसक्नेछ। बालबालिकाका लागि यो खोप सरकारले अमेरिकाबाटै खरिद गर्न थालेको हो।
कति खोप लगाइयो?
मन्त्रालयका अनुसार अहिले सरदर दैनिक ६३ हजार नागरिकलाई खोप लगाइरहेको छ। बिहीबार रातिसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेको एउटा विवरणअनुसार १८ लाख २८ हजार ४ सय ८४ जनाले पहिलो डोज र ४ लाख ६० हजार ३०८ जनाले दोस्रो डोज गरी जम्मा २२ लाख ८८ हजार ७ सय ९२ जनाले कोभिसिल्ड खोप लगाएका छन्।
त्यस्तै २५ लाख ३० हजार ७९३ जनाले पहिलो डोज र ७ लाख ३२ हजार ४ सय २७ जनाले दोस्रो डोज गरी जम्मा ३२ लाख ६३ हजार २२० जनाले भेरोसेल खोप लगाएका छन्। त्यस्तै ९ लाख ३७ हजार ६७० जनाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाएका छन्।
अहिलेसम्म खोप (पहिलो र दोस्रो डोजसमेत) लगाएका ६४ लाख ८९ हजार ६८२ मध्ये ५० प्रतिशतले भेरोसेल, ३५ प्रतिशतले कोभिसिल्ड र १४ प्रतिशतले जोन्सनको खोप लगाएका छन्।
आगामी माघसम्म सुनिश्चित भएको खोपको आंकडा हेर्दा नेपालीलाई थप (बुस्टर डोज) लगाउनसमेत पुग्ने खोप देखिन्छ।
सरकारले कूल जनसंख्याको ७१.६२ प्रतिशत नागरिक अर्थात् करिब २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७६३ जना नेपाली नागरिकलाई खोप लगाउनुपर्ने आंकलन गरेको छ।
यसको अर्थ खोपको दुबै मात्रा लगाउँदा पनि यो जनसंख्याका लागि ४ करोड ३५ लाख १३ हजार ५६२ डोज खोप भए पुग्छ। तर सरकारले ५ करोड २२ लाख ८२ हजार डोज खोप सुनिश्चित गरिसकेको छ।
खोप अभियान किन सुस्त?
सबै नागरिक र बालबालिकालाई समेत पुग्नेगरी खोपको सुनिश्चितता लगभग भइसकेको छ। तर सरकारले भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन।
अहिले सरकारले लगभग दैनिक ६३ हजार नागरिकलाई खोप दिइरहेको छ। खोप नभएर खोप अभियानमा सुस्तता भने आएको होइन।
सरकारले खोप केन्द्रहरू नै बढाउन सकेको छैन। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार दैनिकजसो देशभरका करिब १६ हजार खोप केन्द्रहरूबाट खोप लगाइएको छ। उनका अनुसार खोप केन्द्रको संख्या दिनहुँजसो थपघट भइरहन्छ।
तर पनि खोप नियमित हुन सकिरहेको छैन। कतै भिडभाड भयो भनेर खोप लगाउने काम बन्द गरिएका छन् भने कतै खोप जथाभावी गरिएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
‘यी सबै क्रियाकलापहरूले खोपको व्यवस्थापनमा चुस्तता देखिन्न’ स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका पूर्वअध्यक्ष डा.अन्जनीकुमार झाका अनुसार निजी अस्पतालहरूमासमेत खोप केन्द्र बनाउन सकिन्छ।
‘खोप केन्द्रहरूको व्यापक विस्तार गरिनुपर्छ। सकिन्छ भने निजी अस्पताललाई पनि खोप लगाउन दिने। कोरोनाको उपचार गर्न निजी अस्पताललाई विश्वास गर्ने खोपमा किन नगर्ने? उनी भन्छन्।
उनका अनुसार यसो गर्दा खोप लगाउनका लागि हुँदै आएको तँछाड्-मछाड र अनियमितता पनि कम हुन्छ।
‘सबैले पाउँछौं भनेर ढुक्क पारिएको स्थितिमा, सबैले खोप सहजै बिना भिडभाड पाउने अवस्थाको सिर्जना भयो भने यस्तो हुँदैन’ उनले भने ‘नागरिकमा हामीले खोप पाउँदैनौं कि भन्ने डर छ अनि यस्तो अनियमितता भएको हो। अस्तव्यस्त भएको हो।’